10 Toeram-pisakafoanana any Cork
Cider fan? Azonao atao ny manamboatra siramamy amin'ny iray amin'ireo barazy 10 ireo manerana ny tanàna
Fantatsika fa Toronto dia tanàna iray tia ny labiera, indrindra ny labiera vita amin'ny labiera . Fa ny zava-pisotro misy alikaola any Toronto dia mampiavaka azy. Manana baoritra voalohany any Kanada isika izao, izay natokana ho an'ny zava-pisotro maloto (izay ho azontsika) ary misy bara maro manerana ny tanàna izay manolotra karazana mpitaingina marobe avy any Ontario sy manerana izao tontolo izao, na amin'ny tapany na amin'ny tavoahangy na izy roa . Noho izany dia azo antoka ny filazana fa ny siramamy dia mitazona ny fitakiany miaraka amin'ny labiera, ary ny sôkôlà manamboninahitra dia mety hita ao amin'ny Loblaws sy ny Supernovaraly Lehibe.
Ary te-hanaiky ihany koa aho fa hisy toerana maromaro ihany koa hipoitra mandritra ny fotoana fohy ary raha izany, dia ho azoko antoka ny hanavao ity lahatsoratra ity.
Avy amin'ny pubs ho any amin'ny trano fisakafoanana mankany amin'ireo toeram-pivarotana kely, tsy sarotra ny mahita toerana ahafahana manamboatra ny siramamy ao Toronto ary eto dia ampitomboina 10 ny lisitra misy anao.
1. Ny Baridininy & Kitchen
Ny baran'ny sedera voalohany any Kanada dia nosokafana tao Toronto tamin'ny volana Mey ary iny dia tapaka tampoka tamin'ny fahalianana nanohy nitombo. Ny toerana malalaka sy feno fanazavana ao amin'ny Harbord Village dia manamboatra siramamy maherin'ny 80 mahery amin'ny tavoahangy ary manana 12 kapila mahaleotena avy any Ontario. Ny Ciders dia tapaka ho sokajy dimy: siramamy maina, semi-sweet, mamy sy specialty, voankazo sy mofomamy ary pear sy kisoa. Raha toa ianao ka tototry ny fanandramanao - tsy izany. Ny mpiasa mahasoa dia hampiaraka ny sidina ho anao noho ny fitiavanao manokana. Mety ho hitanao fa misy mpihetsiketsika vitsivitsy izay tsy tianao.
Fantatro fa nanao izany aho ary tsy afaka miandry hiverina aho mba hanandrana bebe kokoa.
2. Ny Craft Brasserie & Grille
Ity toeram-pivarotana mivezivezy any Liberty Village ity dia manamboatra menaka be maromaro, fa ny mpankafy siramamy ihany koa dia hahafaly ny mahafantatra fa misy mpitaingina telo amin'ny tapany ahitana ny West Avenue Heritage Dry, Spirit Tree Estate Draft Cider ary ny Fanahy Tree Estate Dry-Hopped Cider.
Alao ny siramamy misy zavatra avy amin'ny sakafo goavam-be misy salady, platbats, sandwiches ary p fav favor.
3. Tequila Bookworm
Ny Tequila Bookworm, Queen West, dia manompo manokana an'i Ontario, mamokatra labiera, divay sy siramamy mba tsy hahita tavy Strongbow eto. Ny zava-pisotro misy alikaola dia manana ny toerany, fa raha ny marina kosa, ny cidreur ao Tequila Bookworm dia azonao antenaina fa ny bar tsy maintsy manana mpitsoka roa eo an-toerana amin'ny tapitrisa (izay misy miovaova) ary fifantenana tsara amin'ny saka amin'ny tavoahangy sy boaty. Ity dia toerana malalaka, tonga lafatra amin'ny alina iray na mifandray amin'ny namana amin'ny fisotroana vitsivitsy.
Maka seza eo amin'ny iray amin'ireo latabatra iombonana ao amin'ity tranombakoka King West ity izay miompana amin'ny labiera, siramamy ary karazan-tsakafo ary mahatsapa ho toy ny hoe tafiditra tao amin'ny efitrano labiera alemà velona ianao. Misafidiana karazan-tsakafo 25 isan-karazany, ary tafiditra ao anaty siramamy telo avy amin'ny Ontario, Californie, Vermont, Frantsa ary Espaina. Miverimberina matetika ny fijanonana eo amin'ny tapakila - Jereo ny WVRST ao amin'ny Twitter mba hanohizana ny zavatra misy.
Barhop sy ny toerana faharoa, Barhop Brewco dia malaza manerana ny tanàna noho ny lisitry ny labiera mahavariana, izay ahitàna labiera 36 manefa amin'ny kapila ary koa ny fihodinan'ny fàkana ary ny siny tery saina.
Fa ny mpankafy cider koa dia hahita safidy maromaro hisafidy, anisan'izany ny tavoahangy maromaro ary telo na efatra amin'ny tapany, ary ny fiovana dia miova isan-kerinandro. Jereo ny tranonkala ho an'ny lisitra feno alaina isan-kerinandro.
6. Bier Markt
Ity no toerana iray mifantoka amin'ny labiera izay tsy nanadino ny mpankafy siramamy any. Misy toerana efatra ao Toronto mba hisafidianana iray ao anatin'i Etobicoke ary ianao dia eo amin'ny toeran'ny sidera afaka misafidy amin'ny tavoahangy maromaro sy amin'ny tapany. Matetika ny ampongabendanitra dia ampahany amin'ny sehatr'izy ireo ary ny sidina mpihinana "sweet and sour" dia ahitana mpitaingina roa: Brickworks Ciderhouse Batch: 1904 Cider Recorderlig Passionfruit Cider.
7. Bar Begonia
Ny trano fisakafoanana farany ao amin'ny trano fonenan'ny mpanjono avy amin'ny chef Anthony Rose (Fat Pasha, Big Crow, Rose sy Sons, sns.) Dia Bar Begonia, izay nisokatra tao amin'ny toerana iray tao Dupont St.
izay nipetraka foana nandritra ny taona maro. Ny bikabikan-tsakafo Paris ao amin'ny Annex dia mitondra siramamy maromaro ao anaty tavoahangy sy balsia, anisan'izany ireo mpitaingina avy any Ontario (Andrefana Andrefana, Rebel Cider, Empire Cider) ary ny sasany avy any Frantsa sy Espaina. Bar Begonia koa dia manana toeram-ponenana tsara tarehy ary koa lakolosy iray ao ambadiky ny fialam-boly amin'ny andro fahavaratra.
8. The Only Café
Ny Café tokana ao amin'ny Danforth dia efa niasa tamin'ny labour mandritry ny 30 taona mahery ary tsy ny labiera fotsiny. Ny fifantohan-tsain'izy ireo dia efa niasa tamin'ny varotra sy ny tsiram-borona tsara indrindra izay ahafahany manamboatra tavoahangy sy sambony 230 ary koa tolotra 25 eo an-toerana. Tsy tokony ho kibay ny handefa mpankafy mpihinam-batana, ny The Only dia manana mpitaingin-tsoavaly maromaro amin'ny kapila, ny isa valo amin'izao fotoana izao dia dimy. Anisan'izany ny mpitaingina avy any avaratr'i Andrefana, Tranon'ny Fanahy, Revel sy Twin Pines.
9. Trano fonenan'ny Mpanjaka sy ny Beaver
Ankoatra ny fametrahana lisitry ny labiera mahavariana sy ny fanakatsakanana ny ankamaroan'ny zavatra ataon'izy ireo, ny tranokala The Queen and Beaver koa dia manangana mpitsidika sasany ho an'ireo izay mikaroka toerana iray hanidinana ny fisotroany. Azonao atao ny manantena ny Poomie's Farmhouse Cider amin'ny fehezam-boninkazo ary ny Fanahy Tree Cider sy ny Tandrefan'ny Lova Tandrefana amin'ny tavoahangy.
10. Bar Volo
Ny Bar Volo dia mety hanakatona ny toerana tany am-boalohany tsy ho ela, fa hanangana trano fivarotana vaovao izy ireo ka tsy hanahy amin'ny tsy fahampian'ny lisitry ny zava-pisotro misy alikaola, izay ahitana 20 + labiera, divay ary amboara amin'ny tapany miaraka amin'ireo alesina trondro nentim-paharazana sy ireo karazana labiera sy siramamy tsy fahita firy. Ireo mpiompy izay misy izy ireo dia miova arakaraky ny vanim-potoana, fa manantena ny zavatra atolotra ho mahalana sy sarotra ny mahita.
Ny fomba fitsangantsanganana tahaka ny any Toronto
Torolàlana iray hitsidihana an'i Farm Village Riverdale
Inona no tokony ho fantatrao mikasika ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any Toronto
Ny hetsika androany tsara indrindra any Toronto
Zavatra tsy mahazatra hita any Toronto
Toronto Pictures - Pictures of Toronto
Toerana tsara indrindra handehanana any Honduras
Aiza ny Paradise Hotel?
Aiza no hialana amin'ny tranom-bakoka tranom-bakoka ambany
Nahoana no nesorina tao amin'ny tetezan'ny tanàna ny "Lovelocks" malaza any Paris?
Pharmaceuticals 24 ato amin'ny ahy any NYC
Mandehana San Diego Card
Aiza no hividy tany Orchard Road, Singapore
Nanazava i Canada Line & SkyTrain-Vancouver's Rapid Transit System
Ny tantaran'i Pittsburgh Pirates Baseball
Torolalana ho an'ny mpitsidika ho an'ny tanànan'i Zhengzhou
Fihetseham-po lehibe tao amin'ny faritra Washington DC
Fandrarana ny andron'ny Emancipation 2017
Fialambolin'ny Summer Nashville ho an'ny ankizy sy ny fianakaviana manontolo
Road Trip Pros and Cons